सफाइको नमूना विद्यालय | EduKhabar
- दिपक अनुरागी / कपिलवस्तु - दैनिक ४ सय विद्यार्थीको आवत जावत, खाइ खेली गर्ने विद्यालय चिरिच्याट्ट परेको सफा छ । हेर्दा लाग्छ यहाँ विद्यार्थी चकचके छैनन् वा विद्यलायले छुट्टै सफाइ कर्मचारी रोखेको छ । तर होइन, विद्यालय कसरी सफा राख्न सकिन्छ ? उदाहरण हुन सक्छ कपिलवस्तु वाणगंगा २ बैजलपुरको पञ्च निम्न माध्यमिक विद्यालय । २०४५ सालमा स्थापित यो विद्यालय सफाइमा जिल्लाकै नमूना छ, जसले २०६३ सालमा राष्ट्रिय सफाइ पुरस्कार पाएको थियो ।
प्रधानाध्यापक जगतराम रेग्मी * भन्छन्, ‘विद्यालय सफा राख्न हामीले धेरै मेहनत गरेर एउटा पद्यती बनाएका छौं । काम पद्यतीले गर्छ । हामीले त्यसलाई अनुशरण गर्ने हो ।‘।
विद्यालयमा सिकाइमात्रै होइन वातावण पनि सफा चाहिन्छ । सफा वातावरणले सिकाइमा मद्दत पुर्याउँछ । यही कुरा मनन् गरी विद्यालय क्षेत्रलाई प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र बनाएर थालिएको सफाइ अभियान सफल बनाउन विद्यालय फोहोर व्यवस्थापनको लागी विद्यार्थीको सफाइ क्लब बनाइएको छ । आफूले प्रयोग गरेका सामग्रीबाट उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि विद्यालयका ठाउँ ठाउँमा डोकोको प्रयोग गरिएको छ । जहाँ जे हुन्छ त्यही प्रयोग गर्ने हो । आफ्नै गाउँघरमा बनेको डोकोको महत्व विद्यार्थीलाई बुझाउन र प्लाष्टिक मुक्त विद्यालय बनाउन डोको प्रयोग गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालय प्राङ्गण भित्र डोकोमा जम्मा गरिएको फोहोरलाई चार किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ । जसमा पहिला जलाउने फोहोर, प्लाष्टिक फोहोर, कवाड फोहोर र कम्पोष्ट फोहोर छन् ।
किताबका पाना, कागजका टुक्रा लगायत फोहोर जलाउने गरिएको छ । प्लाष्टिकलाई जलाउँन पाइदैन । प्लाष्टिक खाल्डोमा पुरिन्छ । कबाड सामान कवाडीलाई बेचिन्छ । यसरी सामान बचेको पैसा बाल क्लबले संकलन गर्छ । यस बाहेक सफाइ नमूना विद्यलाय घुम्न आउने पर्यटकका लागि भनेर दान बाकस पनि राखिएको छ । यो पैसा पनि बाल क्लबलेनै संकलन गर्छ । यसरी क्लबले अहिलेसम्म करिब ४५ हजार रुपैया बचत गरेको छ । प्रत्येक ३/३ महिनामा निकालिने ब्याजले सफाइ सामान किन्ने गरिएको छ ।
विद्यालय क्षेत्रबाट रहेका रुखबाट झरेका पात संकलन गरेर कम्पोष्ट मल बनाउने गरिएको छ । प्रोटिन र भिटामिन प्राप्त हुने फलफूलबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिन विद्यालय क्षेत्रमा लगाइएका फलफूलका बोटमा यही कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
विद्यालयमा नर्सरी देखि कक्षा ५ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । २ देखि कक्षा ६ सम्मका सबै बालबालिका ल्याप्टप र कम्युटरको पहुँचमा छन् । कक्षा ४ देखि ८ सम्म कम्प्युटर मार्फत पढाइन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीकोे निरन्तर मुल्याङ्कन प्रणाली, गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विद्यालयकै लगानीमा कापिको व्यवस्था विद्यालयले गरेको छ । साझा शिक्षा इ पाटि र शिक्षा विभागले प्रत्येक विद्यार्थीलाई कम्प्युटर र ल्यापटपका लागि सहयोग गरेको छ ।
विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानका लागि हरेक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको लागी विद्यालयमा सभा हल बनाइएको छ ।
शिक्षकको नियमितताका लागि शिक्षक आचार संहिता निर्माण गरिएको छ । जसम शिक्षक कहाँ छ ? विद्यालय वा बाहिर ? काजमा भए कँहा कति दिन ? विदा भए कुन विदा ? कति दिनको बिदा, विद्यालयलाई जानकारी छ कि छैन ? जस्ता सबै कुरा लेखि शिक्षकको दैनिकी गतिबिधिको निगरानी गरिन्छ । यसले क्षिकलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ ।
विद्यालयमा अपाङ्मैत्री शौचालय, छात्रा र छात्रमैत्री शौचालयको निर्माण गरिएको छ । महिनावारी हुँदा समस्या नहोस् भनेर छात्रा स्नान घरको व्यवस्था गरिएको छ । वाणगंगा नगरपालिका १, २, ३ वडा यस विद्यालयको सेवा क्षेत्र हो । सेवा क्षेत्रका सबै बालबालिका विद्यालयमा समेटिएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
प्रध्यानाध्यापक रेग्मी * विद्यालय विकासका लागि दूरदृष्टि जरुरी रहेको बताउँछन् । राजनीतिक आस्थाबाट विद्यालयलाई हामीले धेरै पर राखेका छौं, उनले भने, राजनीति बोकेर विद्यालय छिरेर विद्यालय बन्दैन । सबै शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी यही विद्यालयमा पढाएका छन् । वर्षेनी विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ । हाल विद्यालयमा ४ सय विद्यार्थी छन् । सरकारी सेवामा कार्यरत अरुले पनि आफ्ना छोराछोरी यही विद्यालयमा भर्ना गरेको उनले जनाए ।
प्रकाशित मिति २०७३ असार ११ गते
प्रकाशित मिति २०७३ असार ११ ,शनिबार
Lekhraj3years ago
mohan shrestha ramechhap5 years ago
how nice thank you this school family
bhesh raj khganal5 years ago
school ko ramro kam parti harmro suvakamana / badhai 6